Carrom King ™ Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Carrom မင်းကြီးသည်™
Carrom မင်းကြီးသည်™ APK ကို
Carrom မင်းကြီးသည်™ သူငယ်ချင်းမိသားစု & လေးတွေအကြားကစားမယ့်ဂန္ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအိတ်ကပ်ထဲမှာအိုးဒင်္ဂါးပြား။
Carrom သို့မဟုတ် Karrom, ရေကူးကန်သို့မဟုတ်ဘိလိယက်တစ်ဦးကအိန္ဒိယဗားရှင်း, အ play လက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်း multiplayer နှင့်အိုးရှိသမျှတို့သည်ဒင်္ဂါးပြားအနိုင်ရရန်သင့်ပြိုင်ဘက်မတိုင်မီ! Carrom မင်းကြီးသည်™ ဂိမ်းကစား Modes သာအလွတ် & အနက်ရောင် & အဖြူစိန်ခေါ် features တွေနှစ်ယောက်တည်း။
Carrom မင်းကြီးသည်™ Ludo ရှငျဘုရငျသ™, ရှိသမျှအချိန် #1 ဂိမ်း၏ဖန်တီးသူကနေပါ! မိုဘိုင်းဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းရဲ့ကမ္ဘာအဝှမ်းမှများ၏စိတ်နှလုံးကိုအုပ်စိုးသောဂိမ်း! Ludo ကဘုရငျ™, Carrom မင်းကြီးသည်™အဖြစ်တူညီလွန်းအသုံးပြုသူဖော်ရွေထိန်းချုပ်မှုများနှင့်သင့်မိသားစု, သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ carrom play အခါသင်ရသမျှခံစားချက်များနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပေးခြင်းအံ့သြဖွယ်လက်တွေ့ 3D ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူဂိမ်း၏မူရင်းဖို့ဦးစားပေးပေးသည်!
multiplayer ဂိမ်း mode
★ အွန်လိုင်းလွတ် & အနက်ရောင် & အဖြူ mode မှာကမ္ဘာကြီးကိုကစားသမားတွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်
★ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာကို Join
★ မျိုးစုံ Lobby မှတဆင့်တိုးတက်မှုများကိုထိပ်အပေါင်းတို့သည်လမ်း
★ သင်နှင့်ပြိုင်ဘက်စာရင်းဇယား Watch
လူပျို Player ကိုအော့ဖ်လိုင်းဖြင့် Mode ကို
★ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် Vs Play နှင့် AI အစိန်ခေါ်
★ Tricks Shots သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုစမ်းသပ်အချို့တကယ်လှည်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူသင်၏ carrom ရွေ့လျားစုံလင်ရန်သင့် skills.The လှည့်ကွက်ရိုက်ချက်များ mode ကိုအကူအညီတောင်းသငျသညျစိန်ခေါ်ဖို့အမျိုးမျိုးသောအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအံ့သြဖွယ် mode ကိုခညျြနှောငျတဲ့အချိန် Play
★ pass နှင့်ကစား mode မှာသင့်မိသားစု, သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ Play
သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ non-stop ခံစား၏နာရီရှာဖွေနေပါသလား အခုတော့ Carrom ရှငျဘုရငျ Install နှင့် Ludo ကဘုရငျ™၏ developer များအနေဖြင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကြိုက်ဆုံးဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းကစား။
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ! Carrom ရှငျဘုရငျကို download လုပ်ပါနှင့် In-app ကိုဝယ်ယူမှုနဲ့အတူကိရိယာများပေါ်တွင်ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
- 60% အထိလျှော့ချဂိမ်းအရွယ်အစား
- စတင်အသစ်ကထုံးစံ Carrom ဘုတ်အဖွဲ့, အဓိကအကြောင်းအရာ & Strickers
- ဂိမ်း Play စတိုး
20.19 ကို MB
Gametion Technologies က Pvt Ltd မှ